बालुवाटारवाट आएन निम्ता, एकाविहानै किन भड्किए बाबुराम भट्टराई ? – Classic Khabar
सोमवार बिहानै बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद्लाई पुर्णता दिन देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नयाँ पार्टी निर्माण गरेका माधवकुमार नेपाललाई बोलाए । उनीहरुबीच बालुवाटारमा बैठक चल्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै पार्टी संलग्न गठबन्धनको वर्तमान सरकारप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले भने आ क्रो श पोखे ।
नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर माधव नेपालको नेतृत्वमा गठन गरिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई समेत समेटेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेका बेला गठबन्धनमा आबद्ध जसपाका नेता भट्टराईको टिप्पणीलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।
सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा। भट्टराईले राजा गए पनि, ओली गए पनि कुर्सीको खेल भने जारी रहेको टिप्पणी गरेका हुन्। साथै उनले वैकल्पिक शक्तिको खोजी जारी रहेको उद्घोष पनि गरेका छन्।
‘ज्ञानेन्द्र गए, ओली गए तर कुर्सीको खेल जारी छ। भारत, खाडी पस्ने युवाहरूको लर्को जारी छ। कमिसनखोरको खेलो जारी छ। छिमेकीको हैकम जारी छ। जयसिंह धामीको बेपत्ता जारी छ। छाउपडी जारी छ। छोइछिटो जारी छ। मधेसी, थारू, जनजातिको पहिचानको खोजी जारी छ। श्रमिकको चुलो खाली छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अतः वैकल्पिक शक्तिको खोजी जारी छ।’
‘कुर्सीको खेल जारी’ भनेर उनले सरकारभित्रका गतिविधिप्रति असहमति जाहेर गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आइतबार साँझ दोस्रोपटक भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा भएको छलफलमा तीन नेताबीच सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। सोहीअनुरूप प्रधानमन्त्री देउवाले आज साँझसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
Prev२०७८ साल भदौ १५ गते मंगलबारका दिनमा तपाईलाई कस्तो ? जानकारी लिनुहोस ग्रहगोचर, शुभ अशुभ, मायाप्रेम सहितको दैनिक राशिफल
Nextवामदेवलाई माधवको जवाफ, ‘आउने भए निःशर्त आउनुस्, नत्र अर्को पार्टी खोल्नुस्’